ကြားမိသမျှ မန္တလေးက အစိုးရ ကျောင်းများအကြောင်း | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Myanma News » ကြားမိသမျှ မန္တလေးက အစိုးရ ကျောင်းများအကြောင်း
ကြားမိသမျှ မန္တလေးက အစိုးရ ကျောင်းများအကြောင်း
Posted by mgwalone on Jul 26, 2012 in Myanma News, News | 18 comments
ဒီရက်ပိုင်း စကားပြောဖြစ်သူများထံမှ ကြားသိရသမျှဖြစ်ပါသည်။ ကိုယ်တွေ့မဟုတ်လို့ အတိအကျ မှန်ရဲ ့လားလို့ မေးခွန်းထုတ်လိုသူတွေ ရှိနိုင်ပေမဲ့ အားလုံး စဉ်းစားဝေဖန်နိုင်ဖို့ မျှဝေလိုက်ပါတယ်။
တစ်ယောက်ကပြောတယ်။ သူ့တူလေးက မနလေးက နံမည်ကျော် ကျောင်းတစ်ခုမှာ တက်ပါတယ်တဲ့။ အဲဒါ အတန်းပိုင် ဆရာက (ဆရာလား၊ ဆရာမလား မမှတ်မိတော့ပါ။ သို့အတွက် ဆရာဟုသာ ဆက်လက်ရေးသားပါ မည်။) သန့်ရှင်းရေးအတွက် လိုအပ်တဲ့ ပစ္စည်းတွေ ဝယ်လာရမယ်လို့ ဆိုပါသတဲ့။ နောက်တစ်ရက်မှာ အကြောင်း ကြောင်းကြောင့် ဝယ်မသွားမိတဲ့ ကလေးကို စာမသင်ရဘူးဆိုပြီး အခန်းအပြင်မှာ နေခိုင်းတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ကလေးဆီက ပြန်သိရလို့ ကျောင်းအုပ်ကြီးကို မိဘက သွားတိုင်တော့ အရေးယူပေးပါမယ်လို့ ကျောင်းအုပ်ကြီးက ပြောပါတယ်။
နောက်ဇတ်လမ်းတစ်ပုဒ်က ကျောင်းဖွင့်ဖွင့်ခြင်းမှာပဲ အတန်းပိုင်လုပ်သူက သူ့ကျူရှင်ဘယ်သူ တက်မှာလဲဆိုပြီး အတန်းထဲမှာ လက်ထောင်ခိုင်းပါသတဲ့။ ဒါဒီနှစ် ကျောင်းအဖွင့်မှာ ဖြစ်ခဲ့တဲ့ အဖြစ်အပျက်တွေပါ။ သက်ဆိုင်ရာ ဝန်ကြီးဌာနက အခကြေးငွေ မကောက်ခံရဆိုပြီး ပြောထားလို့ ကျောင်းအပ်ချိန်မှာ ပိုက်ဆံကောက်တာ အရင်ကလို မများပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ အခုကျောင်းဖွင့်ထားတဲ့အခါ ကထိန်ကြေးဆိုပြီး နေ့စဉ် ၁၀ဝ ကောက်ပါသတဲ့။ နောက်တစ်ခုက သန့်ရှင်းရေးကြေးဆိုပြီး ၁၀ဝ ကောက်ပါသတဲ့။ သန့်ရှင်းရေးလုပ်ရတာကတော့ ကျောင်းသူ၊ ကျောင်းသားတွေ ကိုယ်တိုင်ပါပဲ။ ဘာအတွက် ၁၀ဝ တောင်းသလဲ မသိတော့ပါဘူး။
နောက်တစ်မျိုးလဲ ကြားခဲ့ပါတယ်။ မန္တလေးမှာပါ။ ကျောင်းမှာ ဘုရားခန်းမှာ ကျောင်းသူ၊ ကျောင်းသားများက ဆွမ်းကပ်၊ မုန့်ကပ် လုပ်ရပါတယ်။ အတန်းလိုက် အလှည့်ကျ လုပ်ရာတယ်လို့ ယူဆပါတယ်။ ဒီမှာ အတန်းပိုင်များက မှာပါသတဲ့၊ မုန့်ဝယ်လာရင် Dumbo ကမုန့်မဝယ်နဲ့။ SP ကမုန့်ကို ဝယ်ရမယ်လို့ ။
ဒီနှစ် ကျောင်းအပ်ချိန်မှာ ကျောင်းသုံစားအုပ်၊ ပြဌန်းစာအုပ်များကို ကျောင်းများက အခမဲ့ ပေးတယ် လို့ ကြားမိ ပါတယ်။ အခုမိဘတွေဆီက ကြားမိတာက အချိန်အကန့်အသတ်နဲ့ပဲ ပေးတာတဲ့။ နောက်ကျ အပ်တဲ့သူတွေ မရလိုက်ဘူးလို့ ဆိုပါတယ်။ လက်ခံမဲ့ ကျောင်းသားအရေအတွက်အတိုင်း ဝန်ကြီးဌာနက မပေးနိုင်ဘူးလား ဆိုတာကတော့ ပေးတဲ့သူတွေ ကိုယ်တိုင်မှ သိမှာပါပဲ။
ပညာရေးအဆင့်အတန်း မြင့်မားရေးကို ဆောင်ရွက်ဖို့ ပြောနေကြတာ ။ ဒီအဖြစ်အပျက်ကလေးတွေကိုလည်း ထည့်သွင်း စဉ်းစားစေခြင်ပါတယ်။ အခြားအခြားသော အကြောင်းအရာတွေ လည်း ရှိနိုင်မှာပါပဲ။ ကြားမိသမျှ ဝေမျှတာပါ။ မြန်မာပြည် ကြီးပွားတိုးတက်ဖို့၊ အနာဂတ်ခေါင်းဆောင်သစ်တွေ မွေးထုတ်ပေးရမဲ ကျောင်းတွေမှာ ဖြစ်ပျက်နေတာတွေက တိုင်းပြည်အနာဂတ်အတွက် ဘာပြောရမှန်းမသိတော့ပါဘူးခင်ဗျာ။
အယ် မုန့်ကပ်တာကတော့ ကိုယ်တတ်နိုင်တဲ့ မုန့်ကပ်မှာပေါ့နော်
ဒါပေမယ့် ကျောင်းတိုင်းတော့ မဟုတ်ပါဘူး
အထင်ကြီးကြတာလေ ဘာကောက်ကောက် သဘောတွေကျနေတာပဲ
ကိုယ်တိုင်လဲဒီလိုပါပဲ ဘာဝယ်ဝယ်ဈေးကြီးရင် ဟုတ်တယ်ထင်နေတာလေ
ကျောင်းမှာ ဘုရားခန်းမှာ ကျောင်းသူ၊ ကျောင်းသားများက ဆွမ်းကပ်၊ မုန့်ကပ် လုပ်ရပါတယ်။ အတန်းလိုက် အလှည့်ကျ လုပ်ရာတယ်လို့ ယူဆပါတယ်။ ဒီမှာ အတန်းပိုင်များက မှာပါသတဲ့၊ မုန့်ဝယ်လာရင် Dumbo ကမုန့်မဝယ်နဲ့။ SP ကမုန့်ကို ဝယ်ရမယ်လို့ ။
ခေတ်မှီဖွံဖြိုးတိုးတက်သောပြည်နိုင်ငံမို့ ဘုရားကိုလည်းခေတ်နဲ့အညီ နောက်ဆုံးပေါ်မုန့်တွေကပ်စေချင်တဲ့
ိကိုကြောင်လေးရဲ့ အိမ် ပြုပြင်ရန်ရှိသည် ပေါ့နော်…
ရန်ကုန်က ကမာရွတ်မြို့နယ်မှာရှိတဲ့ နံမည်ကြီးကျောင်းတစ်ခု မနှစ်ကသီတင်းကျွတ်မို့ ဆရာမကိုကန့်တော့ရတာ ပိုးချိတ်အကောင်းစားမှလိုချင်တယ်မို့ မိဘများရှာဖွေကန့်ရပါရော။
အပြင်ကဆရာရှိမှာကျူရှင်ယူတဲ့ကလေးက ကျူရှင်သင်တဲ့ပုံစံအတိုင်းသချင်္ာတွက်တာ အဖြေထွက်တာချင်းတူပေမယ့် ကျောင်းကအတန်းပိုင်သင်တဲ့ဆီမှာ ကျူရှင်တက်တာမဟုတ်လို့ အမှတ်မရဘဲ မှားတယ်ဆိုဘဲ။
တဆင့်စကားမဟုတ်ပါ ကျွန်တော့်တူတယောက်ရဲ့ ကိုယ့်တွေ့နော်။
လုံးဝကောင်းသွားဖို့တော့ အချိန်ယူပြီး ထောက်ပြ ပြုပြင်သွားကြရမှာပါပဲ..
ပြောဖို့ တစ်ခု ကျန်သွားတယ်ဗျ။ ဒီနေ့ပဲ လုပ်ငန်းထဲက တပည့်တစ်ယောက်က ပြောပါတယ်။ သူ့တူမလေးကို ကျောင်းက ဆရာမ ကမာ္ဘ့မြေပုံ ကြီးကြီးတစ်ခု ဗီနိုင်းထုတ်လာပြီး ယူလာရမတဲ့။ ကျောင်းမှာ သင်ထောက်ကူ ပစ္စည်း အတွက် ငွေမရှိလို့လား။ ဝန်ကြီးဌာနက မပေးတာလား။ ဒါမှမဟုတ် အတင်းအကျပ်ပဲ အလှူခံနေတာလား။
ဆရာမတွေ အကြောင်းတော့ ပြောချင်နေတာတွေ
အိုင်အယ်လ်ဘီစီ ကျောင်းမှာထားရင်လဲ ကျူရှင်ထပ်တက်ရသေးတယ် ဆိုဘဲ…
နိုရာပြောသလိုပဲ( ကျောင်းတိုင်းတော့ မဟုတ်ပါဘူး)။
ကိုခင်ခပြောသလိုပဲ (ကျောင်းဘုရားခန်းမှာ ကလေးတွေ ဆွမ်းကပ်၊မုန့်ကပ်
လုပ်ရပါတယ်။ အတန်းလိုက် အလှည့်ကျ လုပ်ကြပါတယ်)
ဒီမှာ အတန်းပိုင်များရဲ့လောဘ ဖုံးမရ၊ဖိမရ ပေါ်သွားပါတယ်။ ဆွမ်းတော်စွန့်ရင်
ကိုခင်ခပြောသလိုပဲ ( ကျောင်းကအတန်းပိုင်သင်တဲ့ဆီမှာကျူရှင်တက်တာ
မဟုတ်လို့ အမှတ်မရဘဲ မှားတယ်ဆိုပဲ။) ဒါလဲ အတော် အတ္တစိတ်ကြီးတဲ့ အတန်းပိုင်
အများစုရဲ ့စုတ်ပြတ်နေတဲ့ သေမှပျောက်မဲ့ ရောဂါပါ။
ကိုကြီးမိုက်ပြောသလိုပဲ (ကျုပ်အမြင်ပြောရရင်…အရင်ထက်တော့ နဲနဲပိုကောင်းလာပါတယ်
လုံးဝကောင်းသွားဖို့တော့ အချိန်ယူပြီး ထောက်ပြ ပြုပြင်သွားကြရမှာပါပဲ..)
ဟုတ်တယ်။အချိန် အများကြီးကိုယူရဦးမယ်။ ဒီလို ကျောင်းသားလည်ဂုတ်ခွစီးဆရာဆရာမ
လူတန်းစား ( ဆရာ၊ဆရာမ တိုင်းမဟုတ်တာ သတိထားကြပါ။) အသုတ်လိုက်ပြုတ်ထွက်သွား
မှသာ ကိုကြီးမိုက်ပြောတဲ့ ပိုကောင်းလာမှာပါဆိုတဲ့ ကာလလေးရောက်မယ်ထင်ပါတယ်။
ကိုဝလုံးပြောသလို (ဝန်ကြီးဌာနက မပေးတာလား။ ဒါမှမဟုတ် အတင်းအကျပ်ပဲ
အလှူခံနေတာလား။) ဆိုတဲ့ ကိစ္စကိုတော့ မေးခွန်းနှစ်ခုမှာ ပထမမေးခွန်းကအဖြေပါကွယ်။
ဒါကြောင့် စိတ်လောတဲ့ ဆရာ/မ စိတ်ပူတဲ့ ဆရာ/မတွေက အတင်းကျပ်ကြတာဖြစ်နှိုင်ပါတယ်။
အင်း…. မေဖလားဝါးပြောတဲ့ (ဆရာမတွေ အကြောင်းတော့ ပြောချင်နေတာတွေ
စိတ်မကောင်းပါဘူး။ လူချင်းတူပေမဲ့ အသက်ရှူကွဲကြပါတယ်။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် မိမိတို့တွေဟာ
တခါကတပည့်တွေဖြစ်ခဲ့ကြတာမို့ “ဆရာမတွေ” လို့ ခြုံပြောလိုက်ရင် ကိုယ့်ဝစီကံပဲ ဖြစ်သွားမှာ
ခြုံပြောရရင်တော့ စိတ်ပျက်စရာကောင်းလောက် စိတ်ဓာတ်ညံ့ဖျင်းတဲ့
အိပ်စိုက်၊ အလကားခေါ်သင်၊ ကျောင်းသား/သူ ဒုက္ခရောက်မှာစိုးလို့
ရင်နဲ့ ဆီးကာပေးကြတဲ့ ဆရာ/မတွေလည်း (အနည်းငယ်) ရှိနေသေးပါတယ်။
ဆရာမ TTNU ရှင့် ကျွန်မရေးတာလွန်သွားရင် တောင်းပန်ပါတယ်..ကျွန်မဆိုလိုရင်းက
များများကိုပါ ကျွန်မတို့ခေတ်ကဆရာမတွေကို ဆိုလိုရင်းမဟုတ်ပါရှင့်။ ကျွန်မငယ်ငယ်ကဆရာမတွေ
ကို ကျွန်မခုထိလေးစားဆဲ ချစ်ခင်ဆဲပါပဲ…အဲဒီအချိန်က ဆရာမတွေက ဒီခေတ်လောက်မကျပ်တည်းကြ
တော့ ကျူရှင်လည်းမသင်ကြပါဘူး..တော်တော်များများကလည်း ကိုယ့်တပည့်တွေကို သားသမီးလိုချစ်ခင်
တတ်ကြလို့ တပည့်တွေကလည်း လေးစားကြပါတယ်။ ခုတော့မဟုတ်တော့ပါဘူး ဆရာမတွေကြား ဘယ်
အတန်းက ကျူရှင်ပိုရနိုင်မလည်း ဆိုပြီးကျူရှင်များများယူနိုင်တဲ့ ကလေးတွေများတဲ့အတန်းကို ကျောင်း
အုပ်ဆရာကို လာဒ်ထိုးပြီးယူရတာနဲ့၊ ပြီး ကိုယ်နဲ့မတဲ့ တဲ့သူကိုခေါ်ပြောလုပ်တဲ့တပည့်ကို အညှိးထားရိုက်
တဲ့ဆရာမနဲ့ ကျူရှင်ကို မယူမနေရယူရအောင် အရမ်းခက်တဲ့ အင်္ဂလိပ်စာမေးခွန်းကို အတန်းနဲ့မလိုက်
အောင်မေးပြီး မိမိကျူရှင်မှာမနက်ဖြေမယ်ဆိုမှ ဒီညမှာမေးခွန်းလိုက်နှုတ်တိုက်သင်ပေးလိုက်တဲ့ ဆရာမနဲ့
ပြောစရာတွေ အများကြီး မို့ခုလိုပြောလိုက်မိတာ သိမ်းကြုံးပြောမိသလိုဖြစ်သွားရင် တောင်းပန်ပါတယ်။
ဟုတ်ပါတယ် ဒီခေတ်မှာလည်း ဆရာမကြီးပြောသလို ကျောင်းဆရာမတွေမရှိဘူးမဟုတ်ပါဘူး ရှိပါသေး
တယ် ဒါပေမဲ့ တော်တော်လေးရှားသွားပါပြီရှင်….
I have three older brothers and one younger sister, all are school teachers.
As my parents could not afford to send them to college, they become school teachers by choice. Here I am not talking about their personal life how they have to struggle to become head of high school fromalittle primary school teacher. Nowaday you can find male school teachers only finger counting amount. They are promoted to high school head only when they are about to retire. Before then and till now they have to serve at the remote area. Whenever I visit them I know how they struggle for life. With little amount of salary how they can support their family.
Here is my point, among their story about school, the budget for the school to run comes into consideration. Without budget how you can runaschool of 1000 of students. All of you have ever thought of it. From where they have to find fund? Singapore government takes serious matter as even primary school teacher is as important as to raise the moral of children, government raised salary of primary school teacher to the level of college teacher. Have you ever thought of it.
မောင်ဝလုံးရေ .. ဒီသတင်းတွေ ကြားရတိုင်း .. စိတ်မကောင်းဖြစ်မိပါတယ် .. ။
ဒီလို ဆရာမျိုး မရှိဘူးလားဆိုတော့ … ရှိပါတယ် .. ဒါပေမယ့် … စေတနာအရင်းခံပြီး ဝါသနာအရ သင်ပြပေးနေတဲ့ ဆရာမကောင်းတွေလည်း အများကြီးဆိုတာ သတိရစေချင်ပါတယ် ။
တီချယ်ကြီးရဲ့ ကော့မန့် အောက်မှာ မေဖလားဝါးမန့်ထားတဲ့ ….
များများကိုပါ ကျွန်မတို့ခေတ်က ဆရာမတွေကို ဆိုလိုရင်းမဟုတ်ပါရှင့်။
ဆိုတာကလည်း .. ဒီခေတ်က ဆရာမတွေကို သိမ်းကျုံးစော်ကားလိုက်သလိုပါပဲ …. ။ ဝေးလံခေါင်ဖျားတဲ့ ဒေသတွေမှာ မိုးဒဏ်လေဒဏ်ခံပြီး ဝန်ထမ်းလစာတွေနဲ့ အလုပ်လုပ်နေရတဲ့ ယနေ့ခေတ်ဆရာမတွေ ရှိသလို ၊ တသက်လုံး ဆရာဆိုတဲ့ စည်းစောင့်ခဲ့လို့ … ခြေသလုံး အိမ်တိုင်ဘဝနဲ့ သားသမီးတွေအိမ်ခိုကပ်နေရတဲ့ … ဖိနပ်တောင်စုတ်ပြီး နောက်ပြတ်နေတဲ့ ဆရာမတွေရှိပါသေးတယ် ။
ဆွမ်းဆန်ထဲ ကျောက်ခဲ ရောတဲ့ အဖြစ်တွေတော့ နေရာတိုင်းမှာ ရှိတတ်ပါတယ် .. မြင်တတ်ပါစေ ။
အကယ်၍သာ ကလေးမိဘက ဒီလိုပြသနာမျိုးရှိခဲ့မယ်ဆို ၊ ပညာရေးမှူရုံးထိ ကိုယ်တိုင် သွားရောက်တိုင်တန်းတာမျိုး လုပ်လို့ ရပါတယ် ။ ကျောင်းအုပ်အဆင့်နဲ့ မထိရောက်ဖူးဆိုလျှင်ပေါ့နော် … ။
နောက်တစ်ခုက …. ကျွန်မတို့လည်း အစိုးရကျောင်းတက်ခဲ့တာပါပဲ …. ကျောင်းက ဖြည့်ဆည်းပေးတဲ့ပစ္စည်းတွေထဲ စာသင်ကြားမှု အထောက်ကူးပြု ပစ္စည်းတွေလောက်ပဲ ပါပါတယ် ။ အခန်းသန့် ရှင်းရေး လုပ်ဖို့ ၊ သောက်ရေ ဖြည့်ဖို့ သောက်ရေအိုး ၊ ရေခွက် ၊ အုပ်ဆောင်း ၊… စသည်တို့ကနေ … နောက်ဆုံး ရေအိုးဆေးမယ့် အိုးတိုက်ဖတ်ပါ ဝယ်ရတယ် ။ ဆပ်ပြာဝယ်ရတယ် … ။ ဒါတွေက ကျောင်းသားတွေဆီက အလှူခံပြီးမှ ဝယ်ဖြည့်ရတာမျိုးပါ ။ တံမြက်စည်းဂေါ်ပြား စတာတွေလည်း ကိုယ့်ဘာသာကိုယ်ဝယ်ရတာပါ… ဒါ့ပြင် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေအနေများတဲ့အတွက် အတန်းတွင်းမှာ ဘုရားစင်လိုမျိုးတွေ ထားပြီး မနက်တိုင်း ဘုရားရှိခိုးတဲ့ အလေ့ကျင့်ကို ပျိုးထောင်ပေးပါတယ် .. ဒီလိုပါပဲ … ဘုရားပန်းကပ် ၊ ဆွမ်းတော် ၊ ရေချမ်းကပ်တာမျိုးကိုလည်း အလေ့ကျင့်အနေနဲ့ ပြုလုပ်ပေးခြင်းပါ … ။ ဒါကြောင့် ကလေးတွေဆီကနေ .. အလှူခံတာမျိုး ရှိပါလိမ့်မယ် … ။
အလှူခံတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာ ……. ဓါးပြတိုက်တာမျိုးတာ့မဖြစ်သင့်ဘူးပေါ့ ….. မပါမနေရထက်စာလျှင် တတ်နိုင်တဲ့ ကလေးရှိသလို ၊ မတတ်နိုင်တဲ့ကလေးလည်းပါမှာမို့ စေတနာအလျှောက်သာ လှူဒါန်း ထည့်ဝင်စေတာမျိုးကိုပဲ ဖြစ်သင့်ပါတယ် ကျွန်မတို့ ကျောင်းတက်တုန်းကတော့ အဲ့ဒီလို စေတနာအလျောက်လှူခဲ့တာပါ … ။
အစိုးရအနေနဲ့လည်း စာသင်ခန်းအတွက်တော့ သင်ထောက်ကူပစ္စည်းတွေထောက်ပံ့ပေးနိုင်ပေမယ့် … အခန်းသန့် ရှင်းရေးအတွက် အသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေ ထောက်ပံ့မပေးနိုင်တာကြောင့် ဆရာမတွေလည်း သူတို့ လစာနဲ့ လတိုင်းစိုက်ဖို့က မလွယ်တာတွေ .. ဒါကြောင့်လည်း ….အလှူခံတာမျိုးဖြစ်ပါလိမ့်မယ် ။
ကျူရှင်အနေနဲ့ကတော့ … အခုခေတ်အတော်စားလာတယ် … ။
ကြက်တူရွေးက တော်တော် မယ်တော်က ကဲကဲ ဆိုသလို ဖြစ်နေလို့ပါ ။ မိဘတွေရဲ့ အတ္တနဲ့ ကိုယ့်ကလေး ကျူရှင်ယူအောင် ဆရာမတွေဆီထား ၊ အဲ့လို မိဘတွေများလာတော့ ကျူရှင်မထားနိုင်တဲ့ မိဘကို ဆရာမက အပြစ်မြင် .. ဒါနဲ့ … မုန့် လုံးကို စက္ကူကပ်နေကြပါတယ် … ။ အဲ့ဒါတွေကို လျော့ချဖို့ ….အစိုးရက ပညာရေးကို … တင်းတင်းကြပ်ကြပ် စာမေးပွဲစစ်ပြီး အရည်ချင်းကို စစ်သင့်နေပါပြီ ။ အတန်းပိုင်ဆရာမဆီမှာ ကျူရှင်ထားတိုင်း မအောင်ဘူးဆိုတာသာသိလျှင် …….. ကျောင်းသားမိဘတွေအတွေးတော့ပေါက်လောက်ပြီပေါ့နော် … ။
ဝင်ရောက်ဆွေးနွေး သုံးသပ်ကြသူများအားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဆရာဆိုတာ ဘာပဲ ပြောပြော ဆရာပါ။ ဆရာပီသစွာ အနစ်နာခံပြီး စေတနာကောင်းနဲ့ သင်ကြားနေကြတဲ့ ဆရာတွေ အများကြီး ရှိပါတယ်။ သို့သော် အသပြာကို အရင်းခံပြီး လုပ်နေကြသူတွေကလည်း ရှိနေတော့ အခုလို ပြဿနာတွေ ကြားနေရတာပါ။ အဲ ဒီနေရာမှာလဲ ထပ်ပြောစရာက ရှိနေပြန်တယ်။ မလောက်ငှလို့ဆိုတာ။ ပြောရရင်တော့ ဆုံးမှာမဟုတ်ပါဘူး။
ဒါပေမဲ့ ပညာရေးစနစ်မှာ စာမေးပွဲမှာ အမှတ်ကောင်းကောင်း ၊ ဂုဏ်ထူးများများနဲ့ အောင်မှ ဒီကလေး တော် တယ်လို့ ထင်နေကြတာ။ အချို့သော မိဘများ ပိုက်ဆံပေးလိုက်ရင် ပြီးရော၊ ကုန်ကျစရိတ်များတဲ့ ကျောင်း၊ နာမည်ကြီးတဲ့ကျောင်းမှာ ထားရင် ကိုယ့်သားသမီးတော်ပြီ၊ တတ်ပြီလို့ ထင်နေကြတာ။ မိဘတွေ (အချို ့သော) ကိုယ်တိုင်က ကျောင်းနားကို ကားကြီး၊ ကားငယ်၊ ချိုင့်ကြီး ချိုင့်ငယ်နဲ့ လိုက်သွားပြီး ဂုဏ်ပြိုင်နေကြတာ။ ကျောင်းမှန်မှန်မတက်ပဲ အတန်းပိုင်ဆီမှာ ကျူရှင်တက်ရင်၊ သက်ဆိုင်ရာဆရာကို ကန်တော့လိုက်ရင် စာမေးပွဲအောင်ပြီလို့ လက်ခံထားကြတာ။ အချို့ဆိုရင် ဖြေနိုင်ရင်တောင် မကန်တော့ရင် အဆင်မပြေဘူးလို့ ပြောနေကြတာ။ တက္ကသိုလ်ကျောင်းတွေ၊ အဝေးသင်ဆိုတာတွေမှာလည်း သင်ရိုးကို ဘယ်လိုပဲ သင်သင် စာမေးပွဲမှာ ငါးပုဒ် ကျက်ရင် အောင်ပြီလို့ ဆရာက ပြောရင်တောင် ဆရာရယ် သုံးပုဒ်ပဲ လုပ်ပါ လို့ ဆိုတဲ့ ကျောင်းသားတွေရှိနေတာ (ဆရာအားလုံး၊ တက္ကသိုလ်အားလုံးကို မဆိုလိုပါ)။ သက်ဆိုင်ရာ ဆရာ၊ ဆရာမဆီမှာ ကျူရှင်တက်၊စာမေးပွဲ ဖြေ ပြီးရင် ခုံနံပတ်လေးပါ ရေးပြီး ပစ္စည်းလေးနဲ့ သွားကန်တော့နေကြတာ….
ကျွန်တော့်ဆရာတစ်ယောက် ပြောဖုူးပါတယ်။ “တတ်အောင်သင်ပါ၊ အောင် အောင် မေးပါ” တဲ့။ သူဆိုလိုတာ သိပ်ရှင်းပါတယ်။ တတ်ဖို့က အရေးကြီးတာပါပဲ။ စဉ်းစားစရာတွေက အများသားပါ။ တိုင်းပြည်အနာဂတ်အတွက် သားကောင်းရတနာ၊ သမီးကောင်းရတာတွေ မွေးထုတ်နိုင်ဖို့ ဆရာကောင်းတွေ အများကြီးလိုပါတယ်။ ပညာရေးစနစ်ကောင်းဖို့ကလည်း အင်မတန် အရေးကြီးလှပါတယ်။
မြန်မာပြည် ကြီးပွားတိုးတက်စေလိုသော ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်
ကျောင်းလခမကောက်ရတော့ အလှူခံတဲ့ကိတ်စ တခေတ်ထလာပြန်ဘီ။ ဘာပွဲရှိတယ် တယောက်ဘယ်လောက်ထဲ့ ချမ်းသာတဲ့လူ သူများထက်ဆယ်ဆထဲ့။ ထုံးစံဘဲ။ Fund Raising ဆိုတိုင်း မရှိတဲ့လူက မနိုင်ဝန်ထမ်းရတော့မှာလား။ အဲလို မိုးခါးရေလိုက်မသောက်တဲ့ ဆရာ/မဆို ဘေးထွက်နေရတဲ့ အခြေနေကိုရောက်ရော။ ကျမတို့ အမျိုးထဲမှာ ဆရာမတွေမှ အများကြီး။ စေတနာအရင်းခံပြီးသင်ကြလွန်းလို့ တပည့်မရှား တပြားမရှိ ဂိုဏ်းဝင်တွေချည်းဘဲ။ ကိုယ့်အလှည့်ကျ နှိပ်စက်မဲ့ ဆရာ/မ နဲ့စာသင်ရတယ်။ ရင်နာတယ်တော်။
မကောင်းသောဆရာဆရာမများလဲရှိကြပါ၏( စာတွေ- ကျနော်မှာကျောင်းနေတဲ့အရွယ်ကလေးမရှိလိုပါ။့)
လုပ်ထည့်လိုက်ကြသော ပိုက်ဆံရှိသော မရှိသော မိဘများလဲတွေ့ဘူး မြင်ဘူးပါ၏။
ပညာရေးလောက ပျက်ပြားအောင်လုပ်သူများထဲတွင် ထိုထိုသောမိဘများလဲ အပြစ်မကင်း
ကိုပေါက် ပြောတာ သိပ်မှန်ပါတယ်။ ကျောင်းဆင်း၊ ကျောင်းတက် တနေကုန် ထိုင်စောင့်၊ ချိုင့်ကြီးငယ်နဲ့ စောင့်၊ အိမ်စာကို ဝိုင်းလုပ်ပေး။ ဒီလိုကလေးတွေ ကိုယ့်ဘဝကို ဘယ်လို ကျောင်းကြမလဲ။ အကုန်လုံး အမှီအခိုရှိမှ လုပ်ပေးတဲ့သူရှိမှ နေတတ်တဲ့ ကလေးတွေ ဖြစ်ကုန်ကြရော။ အလွန်အကျူး ဂရုစိုက်ကြသူများ။ အချို့ကတော့လည်း ကလေးပိုက်ဆံတောင်းသလောက် ပေးလိုက်တယ်။ ကျူရှင်ဆိုလဲ ပေးလိုက်၊ ဘာလိုလို့ ပေးလိုက်၊ ညာလိုလို့ဆိုလဲ ပေးလိုက်။ ကိုယ့်ကလေးကို ဘယ်အတန်း ရောက်နေမှန်းတောင် မသိတဲ့ မိဘမျိုးလည်း တွေ့ရဘူးပါတယ်။
တို့သားလေးကျောင်းကလဲအဲလိုလေ. မသာရင်သာရှိမယ်အဲလောက်ထက်ပိုသေး. ့ရိုသေလေးစားဂုဏ်ကျေးဇူးများသောဆရာ. ့ဆရာမများလဲရှိပါသေးသည်